လာမယ့်ဘေးပြေးတွေ့- Final Result (မန်းဂဇက်ချစ်သူများ စာပေဆု- နိုဝင်ဘာ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » လာမယ့်ဘေးပြေးတွေ့- Final Result (မန်းဂဇက်ချစ်သူများ စာပေဆု- နိုဝင်ဘာ)
လာမယ့်ဘေးပြေးတွေ့- Final Result (မန်းဂဇက်ချစ်သူများ စာပေဆု- နိုဝင်ဘာ)
အကြိုက်တူ အမှတ်များလို့ ဆုရသူ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာကို သိချင်နေကြပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
(ပြောချင်တာတွေ ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ :harr: )
၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာလအတွက် မန်းဂဇက်ချစ်သူများ စာပေဆု ရရှိသွားတာကတော့……….
(အနောင်စာ လေသံဖြင့် ဖတ်ပါရန်။)
ဦးကျောက်ခဲ ရေးသားတဲ့ အာဝေနိက ချစ်ဒုက္ခ
ဖြောင်း ဖြောင်းးးးး ဖြောင်းးးးး ဖြောင်းးးးးးး ဖြောင်းးးး ဖြောင်းးးးးးးးးး ဖြောင်းးးးးးးးးးးးးးး
(ကမ္ဘာ့အရှည်ကြာဆုံး လက်(၁။ ခုပ်/ခုတ်)သံကို စံချိန်ချိုးသွားသည်ဟု မှတ်ယူကြပါလေ……..) :hee:
ဘယ်လိုကြောင့် ကြိုက်တယ် ဆိုတာလေးတွေကို….
၁၊ ၁။ အာဝေနိက ချစ်ဒုက္ခ
ရေးသူ- ဦး ကျောက်ခဲ
အရေးအသား အထူး ညက်ညောပြီး ၊
ဟာသလေးများဖြင့် ဆွဲဆောင်ကာ ၊
Post အရှည်ကြီးကို အဆုံးရောက်တဲ့အထိ ၊
လက်က မချချင်အောင် ဆွဲခေါ်နိုင်ပါတယ် ။
မိသားစုဝင်မောင်နှမတွေကြားက မေတ္တာကို အရေးညက်ညက်နဲ့ လှလှပပရေးဖွဲ့ထားတာ နှစ်လိုဘွယ်ကောင်းလှပါတယ်။ မီးထွက်နှမငယ်အတွက် ဟင်းချိုချက်ရင်း တူမငယ်လေးအတွက် နာမည်ရွေးပေးဘို့ ကြောင့်ကျစိုက်တာလေးနဲ့ သိမ်းထားပုံကလဲ လှပပါတယ်။
ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်မိတော့ နှမလင်နေမောင်ဖင်ကျိန်းဆိုတာလေးကိုပြေးမြင်မိပါတယ်။
ဖတ်ရတာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိတယ်။ အရေးအသားကောင်းတယ်။ မိသားစုသံယောဇဉ်ကို ဟာသရသဖြစ်အောင် ရေးထားတာကို ချီးကျူးပါတယ်။
ညီမငယ်မီးဖွားချိန်မှာ မီးနေစောင့်ပေးရတဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို စာရေးသူရဲ့ ပုံမှန် ရေးဟန်အတိုင်း ပေါ့ပါးသွက်လက်တဲ့ စကားပြေ အရေးအသားနဲ့ ရေးဖွဲ့ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ညီမငယ် မီးနေသည်နဲ့ အစားရွေးသူ မိခင်ကြီး အတွက် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စားဖိုဆောင်ပိုင်စိုးပြီး ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးနေရသူ လူပိုကြီး မဟုတ်သော လူပြိုကြီး အား စာဖတ်သူစိတ်ထဲ ထင်မြင်လာသည့်တိုင်အောင် ပသာဒဂုဏ် မြောက်သည်အထိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရေးဖွဲ့နိုင်တဲ့ အရေးအသား၊ ညီမငယ် မီးဖွားချိန်မှာ စိုးရိမ်တကြီး ပူပန်နေတဲ့ ရွှေယောက်ဖနဲ့ အဝေးက လှမ်းလို့ အခါတော်ပေးသူ အစ်မကြီး တို့ အပေါ် စိတ် ကသိကအောက် ဖြစ်ရမှုတွေနဲ့ “နှမလင်နေ မောင်ဖင်ကျိန်း” ရတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဟာသရသ စွက်လို့ သေသေသပ်သပ် ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်
ဒီစာကို ဖတ်ပြီး ဒီလူကြီး တကယ့်ကို စာရေးဆရာတယောက် ဖြစ်နိုင် တယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။ ဇ၀နဥာဏ်ကလည်း ရွှင်တယ်။ စကားလုံးက လည်း ကြွယ် တယ်။ အရေးကလည်း သူ့ဟန်နဲ့ သူ။
တင်ပြပုံ ကလည်း ညက်ညက် သွက်သွက်နဲ့ သားကောင်းတယောက် အနေနဲ့ ရော အကိုကြီး အဖရာ အကိုကောင်း တယောက်ရဲ့ မိသားစု အပေါ် ချစ်ခင် မြတ်နိုးပုံလေး တွေကို အရိုးခံအတိုင်း အသောစွက်ပြီး တင်ပြသွားနိုင်ပါတယ်။ ဖတ်သူကို လည်း စိတ်ပျော်ရွှင်စေပါတယ်။
အမေနဲ့ ညီအမတွေကြားက အချင်းချင်းချစ်ခင်ရင်းနှီးမှု့
အပြန်အလှန်အားကိုးယုံကြည်မှု့ ရိုင်းပင်းမှု့ သံယောဇဉ်ထားမှု့တွေကို.. မိမိကိုယ်တွေ့ဘ၀ဇာတ်လမ်းလေးချခင်းပြတဲ့နေရာမှာ…အသော၊ အထေ့၊ ဟသလေးတွေစွက်ပြီး ရေးဖွဲ့ပြသွားတာ တကယ့် ပရိုလက်ရာလောက်ကောင်းပြီး
ရသမြောက်လှတဲ့အတွက် နိုဝင်ဘာလအတွက် ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။
မေတ္တာတရားတွေအင်မတန်ရှားပါးခေါင်းပါးလာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အစ်ကိုတစ်ယောက်ရဲ့မေတ္တာစေတနာကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမျက်စိထဲမြင်
အောင်ရေးသားထားကိုကြိုက်ပါတယ်။ အများတကာပြောကြတဲ့နှမကြင်ပဲရှိတယ်မောင်ကြင်မရှိ ။ နှမကောင်းစားအစ်ကိုအိမ်ဦးခန်း စတဲ့ စကားပုံတွေထဲ
ကအစ်ကို တွေမောင်တွေနဲ့မတူဆန့်ကျင်ပြီး အစ်ကိုတစ်ယောက်ရဲ့မေတ္တာကရုဏာတွေကိုသဘောကျလို့ပါ။
၂၊ ၁။ အချိန်ပိုင်းဗီလိန်
“လူ့ဘဝမှာ ကိုယ်နဲ့စိတ်ထားတိုက်ဆိုင်သူဆိုတာအမြဲရှိမနေနိုင်ဘူး မဟုတ်လား။
ကိုယ်နဲ့မတူကိုယ့်ရန်သူဆိုရင် အားလုံး ရန်ဖြစ်နေတာနဲ့ ဘဝတိုးတက်ရေးဘယ်မှာရှိပါတော့မလဲဗျာ။
အဲဒီဟာကို ပဋိက္ခလို့ ဆိုလိုတာနော်။ -ဗီလိန်ဖြစ်ရတဲ့ ရက်လေးတွေလျှော့ရင်း အချိန်ပိုင်း သင့်တော်ကောင်းမွန်စိတ်ထားရှိသူ-အဖြစ်ကနေ အဆင့် တက်ယူလို့ ရနိုင်ပါတယ်ဆို တာလေး တွေးဆမိ ပြီး ရေးပြလိုက်ရပါတယ်။”
အဲဒီစကားလေးနဲ့ လူတိုင်းလူတိုင်း မိမိစိတ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံးဖြူစင်အောင်ထားပြီး မိမိဘ၀ကိုမိမိ ခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းအောင်ကြိုးစားစေလိုသောအကြောင်းကို လွန်စွာသဘောကျသောကြောင့်။
(လူသားအတွေးအခေါ် ကို မြင့်မြင့်မားမားပြသ သွားတဲ့ စာတစ်ပုဒ်ပါ
“အချိန်ပိုင်း ဗီလိန်” လုပ်ဗျာ။ အဲ ငါ ဒီအချိန်မှာ ဗီလိန် ဖြစ်နေပြီလို့တော့ သိထားပေး။ ပြီးတော့ “အချိန်ပိုင်း စိတ်ကောင်းထားသူ” လုပ်ဗျာ။ အချိန်ပိုင်း
စိတ်ကောင်းထားသူ အချိန် များ တယ်ဆိုရင် ခင်ဗျား မဆိုးဘူးပေါ့ဗျာ။ ဗီလိန်ဖြစ်ရတဲ့ ရက်လေးတွေလျှော့ရင်း အချိန်ပိုင်း သင့်တော်ကောင်းမွန်စိတ်ထားရှိသူအဖြစ်ကနေ အဆင့် တက်ယူလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ *ပြော ချင်တဲ့ဆိုလိုချက် / သတင်းပေးချက် လေးက… လှပ ပြီး ဆိုလိုတာကို..စကားလုံး ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ .. ဖွဲ့ နွဲ့သီကုံးသွားတာမှာလည်း ပညာသားပါပါတယ် ။
ပုံစံ တစ် ကနေ… ခုနစ် အထိ.. အချက်ကလက်လေးတွေကလည်း..
စာဖတ်သူတွေအတွက်.. နှိုင်းဆ ချင့်ချိန်စရာ…ကောင်းသော.အချက်ကလေးတွေ..ပါ။ ဒါကြောင့်..ဖတ်တဲ့သူ..တွေ..အကျိုးကျေးဇူး..တစ်စုံတစ်ရာပေးနိုင်နေတာ..
သေချာသော… စာမူဖြစ်ပါတယ် ။ )
လူတိုင်းမရေးနိုင်တဲ့ အဖိုးတန်စာပေမို့ အကောင်းဆုံးလို့
ရွေးချယ်ချင်ပါတယ်။ လေးနက်တဲ့ သဘောတရားတွေကို လူတိုင်း နားလည်နိုင်အောင် ရေးပြပေးလို့လည်း သဘောကျမိပါတယ်။
ဝေဖန်ချက်ပေးရမှာကိုတော့ မိကျောင်းမင်း ရေကင်းပြ၊ ဘုန်းကြီးစာချ
၂၊ ၂။ လွှတ်ချစရာတွေအများကြီး
စာရေးသူ ကိုယ်တိုင် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အစိုးရ၀န်ထမ်းဘ၀၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း
ဘ၀တွေကရခဲ့တဲ့ မိမိလုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ တွေပေါ်မှာဆင်ခြင်တွေးခေါ်ပီး
ရေးထားတဲ့ လူတိုင်းစဉ်းစားပြုပြင်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရာလေး..တစ်နည်း
စာရေးသူသုံးလေ့ရှိတဲ့ “လက်ဆောင်အတွေးပါးပါးလေး” ကိုစာရေးသူရဲ့
ကိုယ်ပိုင်ဟန်အတိုင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သွက်သွက်ကလေးချရေးထားတာကြောင့်
အလုပ်ရှင်တွေနဲ့အလုပ်သမားတွေ အသီးသီးရဲ့ လိုအပ်ချက်ချွတ်ယွင်းချက်တွေကို လက်တွေ့ဘ၀ထဲက လက်တွေ့ကျကျ သုံးသပ်ဖော်ထုတ်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ။ အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုလဲ ဖော်ပြသုံးသပ်ထားပါတယ်။
(((တောင်းဆိုသူကလဲ ဥပဒေနဲ့အညီ ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်က ဘယ်လောက်ဘဲတောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။.
အလုပ်ရှင်ဘက်ကလဲ ကိုယ်ဝန်ထမ်းကိုပေးရမယ့် အခွင့်အရေးကို တောင်းဆိုစရာမလိုဘဲအပြည့်အ၀ပေးရမှာ သူ့တာဝန်ပါဘဲ။)))
အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားကြားကနေ မျှမျှတတအမြင်နဲ့ ရေးပြထားတယ်လို့ ထင်မြင်ပါတယ်။
အလုပ်ရှင်ဘက်ကရော၊ အလုပ်သမားဘက်ကပါ ဆင်ခြင်စရာလေးတွေကို
ထောက်ပြသွားတာမို့ အကျိုးပြုစာပေအနေနဲ့ ရွေးချယ်ပါတယ်။ အခုလို
ခေတ်ပြောင်းစနစ်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်လိုချင်တာ ဖြစ်ချင်တာကိုချည်း
ရှေ့တန်းမတင်ပဲ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကိုယ် မှန်ကန်ရဲ့လား၊ မျှတရဲ့လား
စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ အချိန်မီ သတိပေးလိုက်နိုင်တဲ့ ရာသီစာမို့လည်း ကြိုက်နှစ်သက်မိပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်အခါ အခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ခါတော်မှီပို့စ်ကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြေပြစ်တဲ့စကားပြေအရေးအသားနဲ့ မျှမျှတတဖြစ်အောင် ရေးသားနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေရေးချင်တာကို ကိုယ်စားရေးပေးလိုက်သလိုမျိုး ခံစားရလို့ စာဖတ်သူအများစုစိတ်ထဲ မှန်လိုက်တာလို့ ပြောစမှတ်ပြုမိသည့် ပို့စ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းပါသည် အလွန်ကောင်းပါသည်… အသိပညာပေးပို.စ်လေးပါ..
လက်တလောဖြစ်ပေါ်နေသော ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံ အလုပ်အကိုင် အလုပ်သမား ပြသာနာများ အခြေအနေများကို အဘက်ဘက်က သုံးသပ် ပြသွားတာ ချီးကျူးစရာပါ…
အမှန်ပါပဲ.. လွှတ်ချစရာတွေ အလုပ်သမားတွေဘက်ကရော အလုပ်ရှင်တွေဘက်ကပါ အများကြီးရှိနေတာပါ..
ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံမှာ အလုပ်သမားက အလုပ်သမား ရပိုင်ခွင့်ထက် ပိုလိုချင်တာတွေ..
အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားတွေကို ဖိခိုင်းတာတွေ… အဲဒါတွေကို Balance ညီအောင် ညှိပေးသွားတာ အရမ်းကြိုက်မိပါတယ်..
(အလုပ်ရှင် နဲ့ အလုပ်သမား ကြားက.အဆင်မပြေမှုလေးတွေ.ကို..
အလုပ်သမား ဘက်ရော.အလုပ်ရှင် ဘက်ပါ.. မျှတသော အမြင်နဲ့ 
အလုပ်သမားတွေဘက်က အခွင့်အရေးကို.. ညင်သာစွာ.. တောင်းဆိုသွားသလို..
အလုပ်သမားတွေ.ဘက်က လွန်နေတာလေးတွေကို ပြန်ထောက်ပြပြီး.. အလုပ်ရှင်.ဘက်ကိုလည်း.မျှတစွာ..ကြည့်ပြသွားပြီး..ရှေ့ ရေးကို မျှော်မြင်လို့ …စေတနာ ထား ရေးသားတားတယ်ဆိုတာ..ပေါ်လွင်တဲ့ စာမူလေးပါ ။ )
၃၊ ၁။ အိမ်သာ ဘယ်လိုသုံးမလဲ
ခေတ်မီဆန်းသစ်တဲ့ (သို့) ကိုယ်ကိုင်တွယ်သုံးစွဲနေကျမဟုတ်တဲ့
ပစ္စည်းတစ်ခုကို အသုံးမပြုတတ်တာမျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အသုံးပြုနည်းကိုလည်း
မေးမြန်းစုံစမ်းဖို့ အခက်တွေ့နေရတာမျိုး၊ မေးမြန်းစုံစမ်းခွင့်မရတာမျိုး
စတဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ပစ္စည်းကို ဖြစ်သလို
အသုံးပြုသွားလို့ မပျက်စီးသင့်ပဲ ပျက်စီးဆုံးရှုံးရတာတွေ ဖြစ်ရပါတယ်။
အများသုံးနေရာတွေမှာ ကိုယ်တွယ်သုံးစွဲရမယ့် ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုနည်း
လမ်းညွှန်ပေးထားမယ်ဆိုရင် သုံးစွဲသူအတွက်လည်း လွယ်ကူ၊
ပစ္စည်းပျက်စီးမှုကိုလည်း ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ များသောအားဖြင့်
အများပိုင်နေရာအတော်များများမှာ အဲလို အသိပေးစာတမ်းတွေနဲ့ အသိပညာပေးတာ
အတွေ့နည်းပါတယ်။ အသိပညာပေးစာတမ်းတွေ ကပ်ပေးတဲ့
ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားလာစေလိုလို့ အခုပိုစ့်ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ရွေးတဲ့အထဲက တစ်ပုဒ်တည်းသော သုတအသားပေး ပို့စ် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ မဖြစ်မနေထိတွေ့ သုံးစွဲနေရပေမယ့် သေချာ မသုံးစွဲတတ်သေးတဲ့အိမ်သာ အကြောင်းကို ပုံကလေးတွေ ဝေဝေဆာဆာနဲ့ ဗဟုသုတဖြစ်အောင် တင်ပြထားပါတယ်။
လူမှု ဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာ အဓိက မကျပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို ဖော်ပြရာမှာ တစ်ထောင့် တစ်နေရာကနေ ပါဝင်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်သာတွေကို သတိထားမိအောင် ရှေ့တန်းကို ပို့ပေးတဲ့ စာတစ်ပုဒ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ စွန့်ပယ်ထားတဲ့ နေရာလေးကို တခုတ်တရ နေရာပေးပြီးတော့ မသိတာလေးတွေကိုပါ သိအောင် မျှဝေပေးတဲ့ အတွက်
ဒီလိုအိမ်သာနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အကြောင်း ရွာထဲက ရွာသူားတချို့ ရေးခဲ့ကြဖူး
ဒီစာရေးသူကတော့ အိမ်သာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး စံနစ်တကျသင်ပေးတာမျိုး
လမ်းညွန်ထားတာမျိုး မရှိခဲ့ပုံကိုထောက်ပြပြီး နမူနာသရုပ်ဖေါ်ပုံလေးတွေနဲ့တကွ
ဝေေ၀ဆာဆာ ဖေါ်ပြရေးသားတင်ပြထားတာ ပြည့်စုံလှပါတယ်…
“ကိုယ်နေတဲ့ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာ မှာတော့ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ အိမ်သာဟာ ဘယ်လိုရှိနေနေ ဘယ်လို သုံးသုံး အဆင်ပြေချင်ပြေနေမှာပါ ။တရပ်တကျေး သွားလို့ ဧည့်သည် ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ ဒီကိစ္စဟာ နဲနဲ သတိပြုစရာဖြစ်လာတတ်ပါတယ် ။”
လူတွေဟာ ခရီးသွားလို့ ကိုယ်သုံးနေကျ မဟုတ်တဲ့ အိမ်သာပုံစံမျိုးနဲ့ကြုံရရင်
မုချ အခက်တွေ့နိုင်သလို အရှက်လည်းကွဲနိုင်ပါတယ်…ဒါကြောင့်
“အောင်မြလေး ကောင်းလိုက်တဲ့ပို.စ် တကယ်တကယ်…ချီးကျူးပါတယ်.. တစ်ခါမှ မစဉ်းစားမိတဲ့ အကြောင်းအရာပါ…….
ပြီးတော့ရှိသေးတယ်… ရုံးတွေမှာ အပြင်ပန်းမှာတော့ လှလို.ပလို. အိမ်သာသွားတော့ ရေမလောင်းခဲ့တဲ့ အပုံလိုက်တွေ……… ရေပြတ်နေတာတွေ….. စုတ်ပြတ်သပ်တာတွေ…တွေ.နေရတယ်…
တနေရာရာသွားရင်ဖြင့် အိမ်သာတက်ချင်လာရင်ဒုက္ခပဲ ဆိုပြီး စိတ်ထဲ တွေးပူနေရတာပါပဲဗျာ..
အဲလိုလေး အိမ်သာတက်နည်းလေးတွေ သင်ပေးရမယ်ထင်တယ်……..”
ကျနော်တို့နေ့စဉ် သုံးစွဲနေသော်လည်း စနစ်တကျမရှိတာလေးကို
( လူနေမှု ဘ၀မှာ. အခြေခံတော်တော်ကျတဲ့ နေရာကနေ ပါဝင်နေပြီး.. အရေးပါပေမယ့်… အပြောအဆိုနည်းတဲ့ အကြောင်းအရာပါ ပုံလေးတွေနဲ့ .. ဝေေ၀ဆာဆာ တင်ပြသွားတာရယ် အကြောင်းအရာလေးက. ပြောသင့်ဆိုသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာလေး ဖြစ်တာရယ် ကြောင့် ဒီ ပိုစ့်လေးကိုနှစ်သက်မိပါတယ် ။ ဂဇက်ရွာကြီးထဲမှစာများ ကို..ဖတ်ရှုကြသော
ဖန်တီးမှု…လည်းဖြစ်ပါတယ် ။ )
၄၊ ၁။ ကျွန်မတို့ ရဲ့ မိခင်စာပေ
(မြန်မာ စာပေ (မြန်မာ ဘာသာစကား ) ကို ပျက်ယွင်းမှာ.စိုးတဲ့ ..စိတ်ထား/
မြန်မာစာ /စကား.အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသွားမှာကို.စိုးတဲ့ ..စေတနာ တွေနဲ့ 
ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကျောင်းပညာရေး.ကိုလည်း.. မထိတထိ
ကြည့်ပြ သွားတဲ့ အပြင်..စာရေးသူ ရဲ့စကားပြောအရေးအသားက လည်း…
ကျစ်လျစ်မှု.ရှိရှိ… ကျွမ်းကျင်တဲ့ စာရေးသူတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံစံ.ပါ ။
အကျိုး ရှိစေတဲ့ .စာမူလေးပါ ။ )
ရုပ်ဝတ္ထု ပစ္စည်းတွေ တိုးတက်လာချိန်မှာ တစ်ဖက်က ဆုတ်ယုတ်လာတဲ့ မိခင်စာပေရဲ့ အကြောင်းကို ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံတွေအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး တင်ပြ ဆွေးနွေးထားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ စာပေ တိုးတက်ရေးမှာ လိုအပ်နေတဲ့ ထောင့်တစ်ထောင့်ကို ထောက်ပြထားတဲ့ စာတစ်ပုဒ်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ အများစုရဲ့ အရေးတယူ ဂရုစိုက်မှုကို မခံရတော့တဲ့ မိခင်ဘာသာ မြန်မာစာ ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေ၊ ပြုပြင်သင့်တဲ့ နည်းစနစ်တွေနဲ့ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သူ့အမြင် သူ့အတွေးနဲ့ သေသေသပ်သပ် တင်ပြထားတာပါ။
မြန်မာစာပေကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးတဲ့ နေရာမှာ အဓိက အကျဆုံးနဲ့ တာဝန် အရှိဆုံး(လို့ ယူဆတဲ့)ဆရာ/ဆရာမတွေ ကိုယ်တိုင် (တိုက်စစ် စနစ်၊ ဖြတ်ညှပ်ကပ် စနစ် စတဲ့)စနစ်မှားတွေကို လက်ခံ ကျင့်သုံးနေတာကို ပြင်စေလိုတဲ့ဆန္ဒ၊ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွေမှာပါ မြန်မာစာကို အဆင့်အတန်း မြင့်မြင့်နဲ့ သင်ကြားနေတာကို မြင်လိုတဲ့ ဆန္ဒ၊ နောင်တစ်ချိန်မှာ မိခင်စာပေ အနေနဲ့ လက်ရှိ အဆင့်အတန်းထက် ပိုမို မြင့်မားစေလိုတဲ့ ဆန္ဒ တွေအပြင်
အခုအချိန်မှာမှ စ မပြင်ခဲ့ရင် နောင်တစ်ချိန်မှာ ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေကို မြင်ယောင်မိတဲ့ အတွက်ကြောင့် မီးမောင်းထိုး ပြတဲ့အနေနဲ့ ရွေးချယ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၅၊ ၁။ ဇလီဖားတုံး တွေကို ရေတွက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ထိုတနေ့
တန်းဝင်တဲ့ ၀တ္ထုတို အရေးအသားမျိူးပါ။ အဖွင့်အပိတ် စာကိုယ် အားလုံးထောင့်စေ့အောင် ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မိန်းမကြိုက်တော့ မျှော်လိုက်တာ ယောက်ျားကြိုက်တော့ ဆိုက်ဆိုက်လာဆိုတဲ့ ရှေးစကားလေးကို အသက်ဝင်အောင် ဖော်ကြူးနိုင်ပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့ အချစ်ဇွဲ လေးနက်မှုကိုလည်းရသပေါ်လွင်အောင် ရေးနိုင်ပါတယ်။
လုံးချင်းဝတ္ထုတစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်ရသလိုမျိုး ရသကောင်းကောင်း ခံစားရပါတယ်။
၅၊ ၂။ အမေ့အား ငါကြောက်သည်
စာရေးသူ အဆိုအရ လှည်းတန်းမှာ မုန့်စားရင်း မြင်ခဲ့ရတဲ့ မိသားစုကို အခြေပြုပြီး ရေးထားတာလို့ သိရပါတယ်။
မိဘဖြစ်သူ(လို့ထင်တာပဲနော်) ရဲ့ အတင်းအကျပ် ခိုင်းစေမှုကြောင့် လူမှန်းမသိခင် ကတည်းက “မျောက်ပြ ဆန်တောင်း” သကဲ့သို့ အသုံးချ ခံခဲ့ရပြီး လူမှန်းသိတတ်စ အရွယ်မှစ၍ မိသားစု ဝမ်းဝရေးအတွက် တောင်းရမ်းကျွေးမွေးနေရသော ကလေးငယ်၏ နေရာမှ နေ၍ စာရေးသူက ဝင်ရောက်ခံစား ရေးဖွဲ့ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
စာလုံးရေ နည်းသော်ငြားလည်း ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ထိထိမိမိ ရေးသားနိုင်တဲ့ အပြင် စာဖတ်သူတွေကိုပါ အတွေးကိုယ်စီ ကျန်ရစ်နေအောင် ရေးဖွဲ့နိုင်တာ ချီးကျူးစရာပါ။
စာကို ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ စာရေးသူ တင်ပြသွားတဲ့ အချက်အလက်တွေအပေါ် အခြေပြုလို့ ကံ၊ ကံ၏ အကျိုးမှသည် ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေး သာမက အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် ပညာရေးစနစ်အထိပါ ဖြန့်ကျက် တွေးမိအောင် ဆွဲခေါ်ရေးသား သွားနိုင်တဲ့အတွက်။
၆၊ ၁။ ကျွန်တော်တို့အတွက် ၊ သူတို့အတွက် ဘာလုပ်ကြမလဲ ????
( မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်က နေ.ကြည့်ရင်..အတော့်ကို ရေးသင့်တဲ့
အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီး ဆီတွေရဲ့ သန့်စင်မှုကို.(.ပညာရှင်တစ်ယောက်လိ်ု
စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်… လေ့လာ စစ်ဆေးတင်ပြ ထားတာ.လို့ ပြောလို့ မရပေမယ့်..)
သာမန်စားသုံးသူ ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ .. တွေးမိတဲ့ အတွေး/.မြင်မ်ိတဲ
အမြင်တွေကို. .တင်ပြလို့ ရလောက် .ခွင်ထဲကနေ..တင်ပြသွားတာလေးကအားရကျေနပ်စရာပါ ။
*တကယ်တော့ အစားအသောက် အဟာရဆိုတာ အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုအတွက် နေ့စဉ် သုံးစွဲနေရတာ
ဆိုတော့ သမ မျှတပြီး အန္တရာယ်ကင်းဖို့ကောင်းပါတယ် …။ တိုင်းပြည်တစ်ခု
* ပြည်သူတွေလည်း ကျန်းမာ ဖို့ မလိုဘူးလား ….? *ဆိုတဲ့
မေးခွန်းကို..ဖြေကြည့်ရင်.လည်း.. စာရေးသူရဲ့ စေတနာကို.. မြင်နိုင်ပါတယ်
၆၊ ၂။ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်
ရေးသူ- Thaw Zin Loikaw
အနှစ် နှစ်ဆယ်ကျော် စိတ်ကူးနဲ့ လေထဲ တိုက်အိမ်ဆောက်ခဲ့သူ အိမ်ထောင်ဦးစီး တစ်ယောက် အကြောင်းကို အိမ်သူသက်ထားရဲ့ အမြင်ဖြင့် ခံစား ရေးဖွဲ့ထားပါတယ်။
ဇာတ်သိမ်းကို ခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်း စာရေးသူရဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အရေးအသားကြောင့် အဆုံးထိ ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
မဖြစ်နိုင်တဲ့ မျှော်လင့်ချက် တစ်ခုကိုသာ စွဲစွဲမြဲမြဲ ယုံကြည်ထားခဲ့ပြီး ပျက်ပြယ်သွားချိန်မှာတော့ စိတ်ဒဏ်ရာနဲ့အတူ လူ့လောကကြီးထဲကနေ ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ အထိ ခံစား သွားရပုံတွေကို ဂရုဏာရသ မြောက်စွာ ရေးဖွဲ့ သီကုံးသွားတဲ့အပြင် ကျန်ရစ်သူမိသားစု ဘယ်လို ဆက်လက်နေထိုင်သွားမလဲဆိုတဲ့ အတွေးလေးကိုပါ စာဖတ်သူကို ချန်ထားပေးခဲ့နိုင်တဲ့အတွက်။
ခု ရက်ပိုင်း ရသ စာပေတွေကို ကြိုက်နေမိတယ် ။
ရင်ကို ပိုထိစေမယ့် အချက်ကလေးတော့
ဒီ့ထက် နဲနဲလေး ပိုထည့်စေချင်တယ် ။
အဲဒါလေးကလွဲရင် Perfect ပါပဲ ။
၇၊ ၁။ စင်္ကြာဝဠာလုံးဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်း
ဒီဇိုင်းကြောင့် လူမှုဘ၀နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းမှုများ ပိုမိုလွယ်ကူ လာစေရန်ရည်ရွယ်မှုများကို မီးမောင်းထိုးပြသော သုတပိုစ့် တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်။
၇၊ ၂။ နွေဧပရယ် လွမ်းချင်းနဲ့ နောင်တ ပိတောက်
မှန်ရာကိုဝန်ခံရရင် အသဲကွဲတဲ့ ခံစားချက်ကို သိပ်ပြီးနား
မလည်သလို အယုံအကြည်လည်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီစာကို ဖတ်ရတဲ့အခါ လူတယောက် က တကယ်ကို ပဲ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ အသဲကွဲနေသလို ခံစားမိလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အရေးအသားကတော့ ပြောစရာမရှိပါဘူး။ ကျမအနေနဲ့ တော့ ဒီပိုစ့်ဟာ ၀တ္ထုတို တပုဒ်အနေနဲ့ တန်းဝင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တင်ပြတဲ့ အကြောင်း အရာ ရိုးတယ်ထင်လို့ ဒုတိယပေးလိုက်တာပါ။
၇၊ ၃။ သင်၏သုည များကို ကျနော် တို့ စောင့်နေသည်
အတွေးအခေါ်ပိုင်းကို စောင်းပေးပြီး စာဖတ်သူကို လိုရာ အတွေးနယ်ချဲ့နိုင်စေတဲ့ အရေးအသားပါ။ ကျမတောင် သုညကို အတွေးထဲထိ စွဲသွားပါတယ်။ ငါ့မှာ ဘာသုညတွေ များ ရှိနေမလဲ ဆိုပြီး။ သုညကို တင်စားပုံလေး လှပါတယ်။ ဒီလိုစာမျိူး တော်ရုံလူ ရေးတတ်မယ် မထင်ပါဘူး။ တင်ပြပုံ အရေးအသား ဒီထက် ကောင်းရင် တာရာမင်းဝေ မင်းခိုက်စိုးစန် တို့ လိုင်းထဲ တိုးနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
“မိတ်ဆွေ ..ခင်ဗျားမှာ အသုံးမ၀င်သော သုညများကို သိမ်းမထားပါနှင့်။
လွှင့်မပစ်ပါနှင့်။ ကမ္ဘာကြီး၏ နေရာများစွာတွင် ခင်ဗျားသုညများကို စောင့်နေသူများရှိနေသည်ကို သတိရပါ။ ”
ဟုအဆုံးသတ်ထားပုံကိုလည်း သဘောကျမိပါသည်။ထို့ကြောင့် နိုဝင်ဘာလအတွက် ရွေးလိုက်ရပါတယ်။
၇၊ ၄။ ဘဝနှစ်ခုနှင့် ကျွန်မ
ရေးသူ- လုံမလေး မွန်မွန်
လူငယ်တွေရဲ. ဘ၀အားမာန် အပြည့်ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန်ဖြတ်သန်းတဲ့အခါ အားငယ်နေတဲ့စိတ်တွေကို အားပေးတက်လှမ်းနေရတဲ့ စိတ်တွေ ၊ တစ်ခါတလေ စိတ်ဓာတ်ကျအားငယ်တဲ့အခါ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတာတွေကို ဖြေဖျောက် ရတဲ့စိတ်တွေ..
ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားပေးတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးတွေနဲ. ဘ၀ခရီးကြမ်းကို ဖြတ်သန်းနေတဲ့ လူငယ်စိတ်ဓာတ်တွေ..၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိန်းကြောင်းရင် လမ်းမှားမရောက်အောင် ထိန်းသိမ်းချင်တဲ့စိတ်…လူငယ်တွေ ဖြစ်ချင်လိုချင်တဲ့ ပြီးပြည့်စုံ ချမ်းသာတဲ့ ဘ၀ကို ယောင်္ကျားလေး၊ မိန်းခလေး မခွဲခြားပဲ လူငယ်အားလုံး ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်ကို ထင်သာမြင်သာအောင် ပြသွားနိုင်လို ကြိုက်မိပါတယ်။
၇၊ ၅။ ရ = ရသင့်တာလေးတွေတောင်…… မရ ကြ သေးလို့ …..
ဟုအစချီပြီး လူ့အခြေခံ အခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးနေကြရပုံ…
ကို စီကာပတ်ကုံး ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့တကွ လှလှပပတင်ပြထားနိုင်တာ
“ရ ပိုင်ခွင့် / ရသင့်တာလေးတွေတောင်မှ မရ ။ တစ်ချို့ အလုပ်သမားတွေကတော့ ရ ရကောင်းမှန်းတောင်မှ မသိ နိုင်ကြဘူး ။ ”
ဒီလိုလေးထောက်ပြပြီး အခြေခံလူတန်းစား အရေးခပ်သွက်သွက်စာဟန်နဲ့ရေးချယ်ထားလို့
ကြိုက်မိပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလအတွက် ရွေးလိုက်ပါတယ်။
၇၊ ၆။ တောင်ပြာတန်းမှာ မိုးတွေရွာ
ဆင်းရဲပြီး ကျောင်းမတက်နိုင်လို.စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ ကောင်လေး
ပညာရေးအတွက် အချစ်ကို စတေးလိုက်ရမှန်း မသိလိုက်တဲ့ ကျောင်းဆရာပေါက်စလေး..ကိုယ့်ခံစားချက်ကို အသာထားလို. ကျောင်းဆရာကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့သူ..
အချစ်၊အလွမ်း ခံစားချက်ကို အသားပေးထားပေမယ့် ဇာတ်လမ်းကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ဖြစ်လို.ကြိုက်မိပါတယ်
ဖြစ်ချင်တာထက်ဖြစ်သင့်တာကို ဦးစားပေးရတဲ့ဘ၀၊ ဆန္ဒနဲ့ဘ၀တစ်ထပ်ထဲမကျတဲ့ဘ၀မှာ အဆင်ပြေသလိုနေထိုင်ရတဲ့ဘ၀အလွမ်းအမောရသလေးကို
၇၊ ၇။ စမူဆာ ရှာပုံတော်
(ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တိုင်း..တွေ့ ရတတ်တဲ့/
မကြာခဏလည်းစားဖြစ်တဲ့စားစရာ.တွေထဲမှာ.စမူဆာဆိုတာ.လည်း.ပါပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့မကြာခဏ စားဖြစ်တဲ့ အစားအစာတစ်ခုရဲ့
ဒီင်္လောက် အပင်ပန်းခံပြီး..တင်ပြ ပေးနိုင်တာကိုတော့..ချီးကျူး…ရမှာပါ ။ )
ကျနော်အမြဲစားသော နှစ်သက်သော စမူဆာ ဆိုသော
စကားလုံးသည် ရီစရာဖြစ်သော ခနဲ့စရာဖြစ်သောဆိုသည့် ထက်မပိုသော
အရာကို အကိုးအကားများဖြင့်စုံလင်စွာတင်ပြပုံ သည် နှစ်သက်စရာဖြစ်သောကြောင့်။
၇၊ ၈။ အဖြေရှာ ပါရစေ
ဒီနေ့ခေတ်မှာ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ လိင်တူချစ်သူတွေအကြောင်းကို ခိုင်ခံ့တဲ့ ဇာတ်အိမ်၊ ပြေပြစ်တဲ့ အရေးအသား တွေနဲ့ ဖော်ကျူးထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ စာမျက်နှာထက်မှာ အတွေ့ရနည်းတဲ့ ဇာတ်လမ်း အမျိုးအစား ဖြစ်တဲ့အတွက် သမားရိုးကျ အချစ်ဇာတ်လမ်းကနေ ခွဲထွက်ထားတဲ့ စာတစ်ပုဒ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
“မုဆိုးနားနီးမုဆိုး၊ တံငါနားနီးတံငါ” ဆိုသလို ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ မသိမသာ ပြုပြင်ပေးမှုကြောင့် ငယ်စဉ်ကတည်းက ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု လျော့နည်းခဲ့တဲ့ လူငယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လေးနှင့် သံယောဇဉ် တွယ်မိသော (အင်းးးး အချစ်တော် လို့ပဲ ခေါ်ရမလား) လူငယ်လေးတို့ရဲ့ အဖြစ်ကို ဆိုလိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရောက်အောင် သန္ဒရသ မြောက်စွာပဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နဲ့ ညင်ညင်သာသာ ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့ စာတစ်ပုဒ်ပါ။
တစ်ယောက်က ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် စိတ်တွေပြောင်းခဲ့ပြီး ကျန်တစ်ယောက်ကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပဲ လမ်းခွဲဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတဲ့ အဖြစ်က ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လောက် အလေးထား နေရာ ပေးဖြစ်နေသလဲ ဆိုတာကို တွေးမိစေပါတယ်။
၈၊ ၁။ တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်ကို သွားလည်ကြရအောင်
ရေးသူ- Yin Nyine Nway
ယခုနှစ်တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်မီးပုံးပျံပွဲရဲ့ အစီအစဉ်တွေကို နယ်ခံဓာတ်သိတယောက်အနေနဲ့ စုစည်းတင်ပြထားတာ စိတ်ဝင်စားစရာလဲကောင်း ဖတ်ရင်းနဲ့လဲ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ သုတရသပိုစ့်လေးမို့ နှစ်သက်မိရပါတယ်။
၈၊ ၂။ ဘယ်ကိုများ ပြန်ရပါ့
ရေးသူ- စိုင်း ကွမ်းခေး
အရေးအသား ညက်ညောပြီး ၊
စာရေးသူရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးတစ်လုံးကို တပ်မက်မှုကို ၊
စာဖတ်သူတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာပါ လိုက်ခံစားမိအောင် ၊
၈၊ ၃။ အယ်လကိုဟော၏ကနဦးရာဇ၀င်
အရက်အကြောင်းကို သေချာတူးဆွရေးထားတဲ့သုတ ပိုစ့်တစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်…ဟီး…
တကယ်တော့ အတော်လေးသဘောကျတဲ့ပိုစ့်တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် အထက်က သုတပိုစ့်နှစ်ခုကိုတော့ မယှဉ်နိုင်လို့ တတိယပဲရွေးလိုက်ပါတယ်..
၈၊ ၄။ ရင်ခွဲရုံ သရဲ (ကြောက်တတ်သူများ မဖတ်ရ)
စာအရေး အသားအရ ရော အကြောင်း အရာ အရပါ စာဖတ်သူကို သူလိုရာထိ ဆွဲခေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကျင်လည်ခဲ့ရာ ငယ်ဘ၀ အတွေ့အကြုံ ရောက်ဖူး ရာဒေသရဲ့ ရန်ပွဲတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ အငွေ့အသက် လေးတွေကိုပါ ပါးပါးလေး ထည့်ပြီး ပြောသွားပါတယ်။ ကလေးတို့ ဘာသာဘာဝ စပ်စုတတ်ပုံ နဲ့ ဘယ်လိုပဲ မကြောက် တတ်ဖူးပြော ပြော လူ့သဘာဝ အရ တချိန်ချိန် မှာတော့ ရုတ် ခြည်း ပေါ်လာတတ်တဲ့ ကြောက်စိတ် လေး အကြောင်းကို လှစ်ပြသွားပါတယ်။ တကယ့် ၀ါရင့် တယောက်လို စာရေးကောင်းပါတယ်။
၈၊ ၅။ ယ = ယိမ်း …. က ကြမည့် ……လက်တို့၏ ရာဇ၀င်
အနုပညာမြောက်တဲ့ အက္ခရာလေးတွေ ယိမ်းကနေသလို မြင်ယောင်မိလို့ ဒီပို့စ်ကို ကြိုက်နှစ်သက်မိတယ်။
၈၊ ၆။ သဘာဝဓမ္မသစ္စာပြ insigh
( ဘာသာရေးနဲ့ ပက်သက်လို့ကျွန်တော်..မဝေဖန်ရဲပါဘူး ။ ဒါကြောင့်စာရေးသူရဲ
ဘာသာရေး အတွေး/ အမြင်ကို..စနစ်တကျ… အားထုတ်ရေးသားတင်ပြထားတာလေးတွေ့ ရပါတယ်။
သူ့ အဆို / သူ့အတွေး ဟာ..ငြင်းလောက်စရာ.လည်း. မရှိသလောက်ပါပဲ။ သူ
အတွေးကို.. ငြင်းလောက်စရာ / လက်မခံလောက်စရာ.တွေ့/ မတွေ့ ကို.
ခဏ ဖယ်ထားပြီး..အပေါ်ယံ မှတ်ချက်ချရမယ်..ဆိုရင်ကိုပဲ.. ရေးသင့်တဲ့ ပိုစ့်
အထူးသဖြင့်.. ဂေဇက်မှာ…ဒီလို ဘာသာရေးအတွေး / အမြင်တွေ
တင်ပြတာဟာ…(အစွန်းရောက်တာ မဟုတ်သ၍) ရွာကျက်သရေ ..ရှိစေပါတယ် ။
သဘာဝဓမ္မ သစ္စာပြ ..ပိုစ့်ဟာ ရွာ့ ကျက်သရေ ရှိစေဖို
၈၊ ၇။ “ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ လမ်းလွဲလေး”
၈၊ ၈။ ကမောက်ကမ ဟာသ မှတ်စု
ဒါကတော့ ဟာသခြင်းတူတာတောင် ကြားဖူးနေကြ နားရည်ဝနေကြ မဟုတ်တဲ့ ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ဟာသလေးမို့ကြိုက်ပါတယ်။ နဂိုထဲကဟာသဆိုအရမ်းကြိုက်တဲ့
၈၊ ၉။ ကြွေရောင်အိပ်မက်အပိုဒ်ခွဲ
ကိုရင်စည်သူရဲ့ စာထဲကလိုဖြစ်ရပ်မျိုး အပြင်မှာလည်းတကယ်ရှိဖူးတွေ့ဖူးခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ကူးနဲ့လက်တွေ့လွဲချော်နေတဲ့အဖြစ်၊ အထင်နဲ့အမြင်လွဲနေတဲ့အဖြစ်ကို စိတ်ဝင်စားအောင်ရေးသားနိုင်ပါတယ်။
၈၊ ၁၀။ ဘ၀သစ်နှင့်သဟဇာတ
ဒါကတေ့ာ ဖြစ်ချင်တာကို ဦးစားပေးပြီး နှလုံးသားရဲ့ စေခိုင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ချင်တာဖြစ် မောင်ဘချစ်ဆိုတဲ့ စွန့်စားမှုကို ခံစားချက်ကိုကြိုက်ပါတယ် ။
၈၊ ၁၁။ လက်နက်ရောင်းမယ်
ဖတ်ကြည့်မိရင်း မဟာဗန္တုလအလောင်းအလျာ မောင်ရစ် နန်းတွင်း ညီလာခံမှာ
ဘေးလူကို ထ ထောင်းတာကို ပြန်သတိရမိပါသည်။
၈၊ ၁၂။ တောင်ပေါ်က တယောသံ
ရေးသူ- မဟာရာဇာ အံဇာတုံး
လျှို့ဝှက်သဲဖို ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလို စိတ်ဝင်စားအောင် စာဖတ်သူကို စွဲဆောင်သွားနိုင်တဲ့ ပို့စ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဤတွင် ရွေးချယ်ခံပိုစ့် ၂၉ ပုဒ် အတွက် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ပြီးဆုံးပြီ ဖြစ်ပါသည်။ :hee:
ရွာသူ ရွာသား အပေါင်းတို့အနေနဲ့……
စာရွေးသူတွေရဲ့ ခံစားချက် ဖော်ပြထားတာတွေကို ….
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားလိုပါတယ်။
ညီညာဖျဖျ စည်းလုံးကြ၍ သက်တမ်း ၅လတိုင်အောင် စာရွေးပေးခဲ့ကြသော…..
ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ကြီးအား (၂။ ၎င်း၊ လည်းကောင်း)းးးးးးးးးးးး
ရွာ့အရေးကို ၀ိုင်းဝန်းကူညီလိုတဲ့ စိတ်စေတနာနဲ့ စစ်ကူပေးကြသော ……
ဂျူးလိယက်ဆီဇာ၊ အလင်းဆက် နဲ့ ဦးမာဃ တို့အား (၎င်း၊ လည်းကောင်း)းးးးးးး
(၃။ ၎င်း၊ လည်းကောင်း) အပြင်……..
သဂျီးမှစ၍ ရွာတွင်း ရွာပြင် ရှိကြကုန်သော……..
ရွာ(မ)သူား အားလုံး အားလုံး အားလုံး တို့ကိုလည်း ……
နောက်လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလမှာ ………….
၂၀၁၂ခုနှစ်အတွက် နောက်ဆုံးဆုရသူကို ……..
အလှည့်ကျ ကြေညာပေးမယ့် ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ဝင်နဲ့အတူ …………
စစ်ကူပေးကြမယ့် ဖတ်ကူတွေကိုလည်း မျှော်လင့်စောင့်ကြိုနေပါကြောင်းးးးးးးးးးးးး
အမြဲကောင်းပြီး ဆုမရသေးတာ အလင်းဆက်နဲ့ ကိုဆာမိ အဖော်ရှိပါတယ်။
အမှတ်လေးတွေကပ်ကပ်ပြီးကျော်သွားလို့သာ ဆုနဲ့လွဲနေရတာမို့လို့ အားမလျှော့တမ်းကောင်းသထက်ကောင်းအောင် ကြိုးစားနေစေချင်ပါတယ်။အပိုဆုလည်းရရမှာပေါ့။
ဆုအတွက်ထက် ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရည်တက်လာစေချင်တာပါ။
အလင်းဆက်ဟာ တစ်နေ့မှာ နာမည်ကျော်စာရေးဆရာကြီးဖြစ်လာမှာပါ။
အဲဒီတော့သာ ဂဇက်မိသားစုကြီးကို မေ့မသွားပါနဲ့လို့ ။
.. အလင်းဆက်ရဲ့စာတွေကို သေသေချာချာပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ့မယ်..။
နောက်နှစ်မှာ.. တပုဒ် ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြဖို့.. စိတ်ကူးထားပါတယ်လို့နော…။ ဒီနှစ်တော မပါနိုင်တော့ပါဘူး.. :harr:
သတင်းစာမှာပုံနှိပ်ဖေါ်ပြတာထဲပါတာ.. မပါတာဟာ.. ရသမြောက်တယ်..စာရေးကောင်းတယ်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူ;လို့ပါ..။
သတင်းစာမို့.. သတင်းသဘောနဲ့.. ခေတ်ကာလကိုထင်ဟတ်တာမျိုးရှိတဲ့.. စာတွေရွေးရတာမို့ပါ..။
.. နိုင်ငံခြားနေမြန်မာတွေအတွက်မို့.. မြန်မာစာကြိုးစားပမ်းစား..ဖတ်ရသူတွေကြားထဲ.. ရသကို.. ဦးစားမပေးနိုင်တာလည်း ပါပါတယ်..
ကျနော်ပြောတာနဲ့ ပြန်ဖြေရှင်းကြတာ နည်းနည်းလေးလွဲနေပါတယ်။
ကျန်ာပြောတာက ကျနော့်ပိုစ်ကို စတစ်ကီမပေးလို့မဟုတ်ပါ။
အများနဲ့ဆိုင်သော ဖတ်ရွှေး အဖွဲ့ကို သူကြီးက ပစ်ပယ်ထားတယ်လို့ခံစားရလို့ပြောတာပါ။
ကျနော်ရေးတဲ့ ပိုစ်ကို စတစ်ကိပေးခြင်းမပေးချြင်း ကို စိတ်ထဲမထားပါ။
ဖတ်ရွှေးအဖွဲ့တွင် အများက လိုအပ်သည်ထင်လျင် အများက ပါစေချင်လျင် ဆက်လက်ပါဝင်ပါမည်။
အရှင်းဆုံးပြောရလျင် ဖတ်ရွှေးအဖွဲ့တွင်ဝင်၍ စာဖတ်ခြင်းရေးပေးရခြင်းမှာ ကျန်ာအတွက်
အလုပ်မအားသည်မှန်သော်လည်း ကျနော်အချိန်ထဲမှ အိပ်ချိန်လျော့လိုက်လျင်ဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်က ရသကို နှစ်သက်သူဖြစ်၍ ကျနော်နှစ်သက်သောပိုစ်သည်လည်း
ရသနွယ်သော ပိုစ်များသာဖြစ်နေမည်ကို ကြိုတင်ဝန်ခံထားပါသည်။
အားလုံးပဲ ကျေလည်ကြပြီ ထင်ပါတယ်။
ဖတ်ရွေးအဖွဲ့မှာ ဆက်ပါဖို့ အားပေးပါတယ်။ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်။
ပြောတုန်းကပြောပြီး နောက်ဆုံးရှောချသွားတဲ့ ဦးပေါက်ကိုယ်စား အလွန်ပဲ ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ ကျနော့်ကို အဲလိုလာ စမ်းလို့ကတော့ အသက်ခြင်း လဲပစ်လိုက်မယ်……….
ဦးလေးကိုယ်စား တူက မခံနိုင်ဖြစ်နေတယ်။
အသက်ခြင်း လဲပစ်လိုက်မယ်ဆိုတာ …
ကြောင်ကြီး အသက်တော့ ပါမယ် မထင်ဘူး။
အန်တီပဒုမ္မာနဲ့ အတူတူ စာရင်းဝင်ပေးသွားပါသည်။ :hee:
ဆုပေးပွဲ နေ့မှာ..အနောင်စာ လုပ်မှာ…ဘယ်တူလဲ.ဟင်
အန်တီမမပဲ.လား ။အန်င်္တီမမ ပဲ..လုပ်စေချင်တယ် ။ ရင်တသိမ့်သိမ့်တုန်အောင် ကြေငြာ နိုင်လို့ ..
တကယ်တော့ … ဆုပေးပွဲကို ဦးဆောင်ကျင်းပမှာဟာလဲ
ဥက္ကဌ မပဒုမ္မာနဲ့ မမ တို့ပဲ ဖြစ်ပါကြောင်း…။
အလင်းဆက်နဲ့တကွ ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ ပါနေကျ ကလောင်ရှင်တွေကို ပြောချင်ပါတယ်….
တကယ်တော့ လူ့စိတ်ဆိုတာ အသစ်ကိုပိုတောင့်တပါတယ်။ အသစ်ကို ပိုမဲတင်းရွေးချယ်တတ်ပါတယ်။
အရင်ရွေးပြီးသားကလောင်အမည်နဲ့စာရင် ကလောင်အမည်သစ်ကိုသာ မသိစိတ်က ဦးတန်းရွေးချယ်တတ်ပါတယ်..။
အဲဒီကြားကပဲ ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ ဆက်ကာဆက်ကာပါနေရင်တော့…
“တော်ရုံကောင်း …” လို့မဟုတ်ပဲ “ မပယ်နိုင်အောင်ကောင်း…” လို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း…………
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မပြောတတ်တာကို ပြောချင်တာတဲ့အတိုင်း ထိထိရောက်ရောက် ပြောသွားပေးလို့ ကျေးးးးဇူးးးးးးး
ဒါဆိုရင် ၀မ်းသာလိုက်တော့မယ်ဗျာ..။ ဆန်ကာတင်ထဲမှာပဲ ၀ဲလည်ပြီး ပျော်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောလိုက်ပါရစေ။ ဆုရသူများအတွက်ကတော့ ဆက်လုပ်ပါလို့။
ဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ မကြာခဏပါသူ၊ ပိုစ့်တွေ အများကြီး ဆန်ခါတင်စာရင်းပါသူမို့ အလင်းဆက်ကိုယ်စား စာရွေးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့တောင် မချင့်မရဲ ဖြစ်ရပါတယ်။
အက္ခရာတွေ တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး ချီတက်လာတဲ့ အလင်းဆက် ….
ပုဆိုးခြုံထဲက လက်သီးပြ လောက်ပဲ လုပ်တတ်သူမို့….
ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေးးးးးးးးး :buu:
အန်တီမမ အနောင်စာ လုပ်ပါ
သန်းကယူး ဘာ လို့ ။
လူကြားထဲ မဟာအရှက်တော် မကွဲပါရစေနဲ့။ :buu:
ဒီလို လူစုံတိုင်း ပြောချင်တာ ပြောလို့ ရကြေးလား။
ဒီပိုစ့်မှာပဲ အများသိအောင် ကြေငြာ ပါမယ်…
အများသိကြတဲ့အတိုင်း မပဒုမ္မာ အရေးကြီးကိစ္စများပြီးဆုံးလို့ ရွာထဲ ပြန်ဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖန် ၁၅.၁၂.၂၀၁၂ နေ့ကစလို့
မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆု ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ကို ဥက္ကဌအဖြစ် ဦးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်း…..
ကျွန်တော် ဦးဦးပါလေရာကလဲ ဖတ်ရွေးအဖွဲ့မှာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆက်လက်ပါဝင်နေမှာဖြစ်ပါကြောင်း….
လောလောဆယ်တော့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကြောင့် ရက်လေးဆယ်ခန့်အတွင်း ရွာထဲမှ ခေတ္တပျောက်နေခြင်း ၊ ရွာ့ကိစ္စများမှာ မပါဝင်နိုင်ခြင်းများ ရှိနိုင်ပါသဖြင့် ခွင့်လွှတ်ကြပါရန် တောင်းပန်အပ်ပါကြောင်း…..။
ဆန်ကာတင်ထဲမှာပါတဲ့ သူတွေရဲ့အမည်စာရင်းကို စာရေးသူရဲ့ ကော့မန်မှာ လာထားလို့မရဘူးလားဗျာ။ ကျွန်တော်က ပုံမှန်မသုံးဖြစ်တော့ ဘယ်သူတွေကတော့ ဆန်ကာတင်စာရင်းထဲမှာပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆုရတယ်ဆိုတာ မနည်းရှာဖတ်ဖတ်နေရလို့ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတာ့ ဥပမာ ကိုယ့်စာမူ ဆန်ကာတင်ထဲမှာပါကြောင်းသိရတဲ့အခါ Linkလေးပဲပေးခဲ့ပေးခဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူသွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်အောင်လို့ပါ။ နောက်တစ်ခုက မန်းဂေဇက်ချစ်သူစာပေဆုဆိုတာ ပေးတာမကြာသေးဘူးထင်ပေ့မယ်။ ဘာတွေဘယ်လိုပေးတယ်။ ဆုရစာရေးသူကို ပွိုင့်ပေးတာလား။ ဆိုတာ ကျွန်တော်တော့ (အ တယ်ပြောပြော ခုထက်ထိအောင်မသိသေးပါဘူး) ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က ဂေဇက်နဲ့ အလှမ်းနည်းနည်းကွာဝေးလိုက်သေးလို့ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ဝင်တွေထဲက မည်သူမဆို ပြန်လည်ဖြေကြားပေးလို့ဖြစ်ရင် ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်။ နောက် အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းလေးတွေအကြောင်းလည်း နားလည်ချင်ပါတယ်။ ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ရေးနေတဲ့ဆိုဒ်ကို ဘယ်လိုကောင်းတယ်ဆိုတာ သူများတွေကို ညွှန်းချင်လို့ပါ။ အားလုံးကို လေးစားလျှက်…..။ သော်ဇင်(လွိုင်ကော်)
ဟိုဟာကတော့ဖြင့် ဟိုလိုဘာ …
အန်တီ မမ .. ဒီမှာ မေးနေဒယ် ခည …
စိတ်ဝင်တစား မေးမြန်းတာ ၀မ်းသာပါတယ်။
ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ဆိုတာ ၀ါသနာပါသူ သက်ကြီးရွယ်အိုများ(လူငယ်တချို့လည်း ပါပါသည်) စုပြီး ရွာရဲ့ စာပေအဆင့်အတန်း တိုးမြင့်ပါစေကြောင်းဆိုပြီး ကိုယ်ဖတ်မိတဲ့အထဲကမှ ကြိုက်နှစ်သက်တာလေးတွေကို တစ်လတစ်ခါ ရွေးချယ်ဆုပေးကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုပေးပွဲကို ၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီလထဲမှာ ကျင်းပဖို့ ရည်ရွယ်ထားပြီး ဆုရသူ/ ဆုမရသူ ရွာသူားများအားလုံး ပျော်ပျော်ပါးပါး တက်ညီလက်ညီ တက်ရောက်ကြဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆုပေးပွဲရဲ့ အဓိက စပွန်ဆာများကတော့ အဘဆွေ၊ အဘဖော နဲ့ ဦးပါလေရာတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုပေးပွဲနဲ့အတူ ရွာသူားများရဲ့ မိတ်ဆုံစားပွဲ (ဘာကျွေးမယ်တော့ မသိ) ကို နှစ်စဉ် တစ်နှစ်တစ်ခါ ကျင်းပကြဖို့အထိ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
ဆုပေးဖို့ စာမူရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ဝင်များက အကြိုက်ဆုံးကို ၃ မှတ်၊ ဒုတိယ အကြိုက်ဆုံးကို ၂ မှတ်၊ တတိယအကြိုက်ဆုံးကို ၁ မှတ် ဆိုပြီး ပေးပါတယ်။
အားလုံးပေးတဲ့ အမှတ်တွေကို စုပေါင်းပြီး အမှတ်အများဆုံးရတဲ့ စာမူကို ဆုရစာမူအဖြစ်ရွေးချယ်တာပါ။
တခါတလေ ကောင်းတဲ့ ကြိုက်တဲ့စာမူတွေများပြီး ရွေးရခက်တဲ့အခါမှာ တတိယအကြိုက်ဆုံးကို ၅ပုဒ်အထိ ရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဖတ်ရွေးအဖွဲ့က လစဉ်ပုံမှန်ရွေးပေးရသလို၊ ပုံမှန်မရွေးနိုင်သော်လည်း ကိုယ်တာဝန်ယူပေးနိုင်သော လတစ်လအတွက် ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ကို ၀ိုင်းကူ၍ ဖတ်ကူ အဖြစ်လည်း ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ်ပဲ ဒီလထဲမှာ ကိုယ်ဆုရစေချင်သော၊ ကြိုက်နှစ်သက်သော ပိုစ့်များ ရှိပါကလည်း ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ အမှတ်ပေးနည်းအတိုင်း ရွေးချယ်ပြီး mr.solakoko@gmail.com ကို ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
ပဒုမ္မာရဲ့ အပိုဆုအနေနဲ့ ဆုရသူများကို ၁၀၀၀၀ ထက် မများသော နှစ်သက်ရာစာအုပ်လက်ဆောင် ပေးရန် အစီအစဉ်လည်း ရှိပါတယ်။
စာပေဆုအတွက် သုတ၊ ရသ၊ ဘ၀သရုပ်ဖော်၊ နည်းပညာပိုင်း စသည်ဖြင့် ခွဲခြားထားမှု မရှိပဲ ဖတ်မိသမျှထဲက ကြိုက်နှစ်သက်တာကို ရွေးချယ်ခြင်းသာဖြစ်၍ အကောင်းဆုံးစာမူလို့တော့ မပြောနိုင်ပါ။
သော်ဇင်တို့လို လက်စွမ်းလက်စ ရှိသော ကလောင်ရှင်များကို ကြိုဆိုပါတယ်။
ဦးပါပြောသလို ဆုမရသေးသော်လည်း မပယ်နိုင်အောင် ကောင်းနေတယ်ဆိုတာတော့ အမှန်ပါ။
ဒီလ ဆုရစာရင်း ကြေညာရာမှာ ပိုစ့်လင့်ခ်များ ထည့်ပေးထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
္ဋ္ဋ္ဋ၎င်းလင့်ခ်များကို ကော်ပီလုပ်ပြီး ဖွင့်ကြည့်တာ ရပါတယ်။
သော်ဇင်ပြောတဲ့ စာရေးသူရဲ့ ကွန်မန့်မှာ ထည့်စေချင်တယ်ဆိုတာကို သိပ်နားမရှင်းဘူး ဖြစ်နေလို့။
နောက်တစ်ခုက ဆုရနဲ့ ဆန်ခါတင်ပိုစ့်များကို အရင်လတွေတုန်က တံခါးလိုက်ခေါက် အသိပေးကြပေမယ့် အခုလမှာ မေ့လျော့ပေါ့ဆသွားလို့ အဲဒါကိုလည်း သည်းခံခွင့်လွှတ်ပါလို့။
အထက်ကပြောခဲ့သလိုပါပဲ အရင်တစ်ခါတုန်းက ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ကိုယ်စားဆိုပြီး ကျွန်တော်စာမူမှာ Commentလာထည့်သွားပါတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ ရှာဖတ်ရတာအဆင်ပြေသွားရောဗျာ။ နောက်တစ်ခုက 2013 ခု၊ ဇန်န၀ါရီလမှာ ဆုပေးပွဲလုပ်မှာဆိုတော့ ဘယ်မှာလုပ်မှာလဲ။ ဘယ်မြို့မှာလုပ်မှာလဲ။ သိချင်ပါတယ်။ ဆုရရမရရ။ အခွင့်ရှိတုန်းလေး တက်ရောက်နိုင်မလားလို့ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရေးဖော် ရွာသူရွာသားတွေနဲ့များတွေ့ရမလားလို့လေ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါခင်ဗျား။
ရှေ့အပတ်တွေတုန်းက ဆုကြေညာသူတွေက ဆုရ၊ ဆန်ခါတင်ပိုစ့်တွေမှာ လိုက်ပြီး အသိပေးအကြောင်းကြားတယ်။
ဒီတခေါက်ကျတော့ အဲလို အသိပေးဖို့ သတိမရလိုက်လို့ အသိမပေးဖြစ်လိုက်ဘူး။
နောက်လတွေမှာ အဲလို အသိပေးအကြောင်းကြားဖို့ နောက်လူကို သတိပေးပေးပါ့မယ်။
ခုလတော့ ဒီလောက်ကြာနေပြီထင်လို့ မလိုလောက်တော့ဘူးထင်ပါတယ်။
ဆုပေးပွဲလုပ်မယ့်နေရာ၊ ရက်၊ အချိန် (အစီအစဉ်) ကို အတိအကျ မသတ်မှတ်ရသေးပါဘူး။
ဇန်န၀ါရီလထဲမှာ စီစဉ်ပြီးရင် ရွာထဲမှာ ပိုစ့်တင်ပြီး အကြောင်းကြားမှာပါ။
တက်ရောက်မည့်သူစာရင်းကိုလည်း အဲဒီမှာ တချိန်တည်း စာရင်းကောက်ဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။
တက်ရောက်နိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ရေးဖော်ရေးဖက်၊ တွေးဖော်တွေးဖက်၊ ငြင်းဖော်ငြင်းဖက်တွေနဲ့ ခင်ခင်မင်မင် ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆုံတွေ့ကြရမှာဆိုတော့ ကျိန်းသေပေါက် လာရကျိုးနပ်မှာပါ။
ဤကား ကြော်အောင် ညာခြင်း လုံးဝ လုံးဝ မဟုတ်ပါကြောင်းးးးးးးးး
မြို့ ကတော့ ရန်ကုန်မှာ ဘဲ လုပ်မှာပါ ကိုသော်ဇင်ရေ။
ရက်က အကြမ်းဖျင်း ဇန်န၀ါရီလ တတိယပါတ်လောက်ဖြစ်မယ်လို့ မှန်းထားကြောင်းပါတဲ့ ။
ဒီတော့ ဇန်န၀ါရီ တတိယပါတ်လောက် ကို အလုပ်တွေ ဘေးရွှေ့ထားဗျှို ။ အတိအကျ ကတော့ အန်တီမမ ပြောသလိုပါဘဲ ရွာထဲမှာ ပိုစ်တင်ပြီး အကြောင်းကြားမှာပါ။ ငှက်ကထကြီးတွေ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကော လူမှုရေးတွေနဲ့ပါ အလုပ်များနေကြလို့ ပါ။
ဒီလ ဖတ်ကူဖို့ 
အချိန် ရ ရင် ရသလို ဖတ်ပေးနေမှာ ဖြစ်ကြောင်း
ဖတ်ခဲ့သမျှ စာမူတွေ ထဲက အကြိုက်ဆုံး ၇ ပုဒ်ကိုလည်း
အကြောင်းညီညွတ် လို့ 
အမှတ်ပေး / မှတ်ချက်ကလေးတွေ
ရေးပြီး ပို့ဆောင် ပေးပါမည့်အကြောင်း
အကြောင်းညီညွတ် ရင်. . . .
ကျွန်တော့် ဘက်က အခြေအနေအရ
ကျွန်တော့ အတွေး ထဲ မှာတော့
ရွာ့ ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ နဲ့ စာပေဆု အစီအစဉ်
တတ်နိုင်သမျှ ကူညီ နေချင်ပါကြောင်း
ခွင့်ခွင့် လေး လွှတ်ပါလို့ 
(ရွာ့ ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ နဲ့ စာပေဆု အစီအစဉ် ဖြစ်မြောက်ရေးကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီ နေချင်ပါကြောင်း) ဆိုတဲ့ စေတနာလေးကို သိရတာလို့ ကျေးဇူးလည်း တင်၊ ၀မ်းလည်းသာပါတယ်။ ကူညီပေးနိုင်သလောက် ကူညီပေးတာကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ လေးကျောက်ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဂုဏ်ပြုပါတယ်လို့…. Congratulation, Mr. Stone!!!!
အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းတွေကြောင့် ရွာထဲကိုမလာနိုင်တာ တောင်းပန်ပါတယ်..အခွင့်သင့်ရင်တော့ သင့်သလို ရွာပြင်ကနေ ပတ်ချောင်းပါတယ်..
စကာတင်တွေအတွက်လည်း ၀မ်းသာမိပါတယ်…၂၉ ပုဒ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ တော်တော်လေးကို အံ့သြသွားပါတယ်..ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ရဲ့ အပင်ပန်းခံမှုနဲ့ စေတနာတွေကိုလည်း လေးစားမိပါတယ်…
လုံမကတော့ ဆုရဖို့အထိ ဘယ်တုန်းကမှ မမှန်းဖူးပါဘူး… စကာတင်ပါတယ်ဆိုရင်ကို တော်တော်လေးပျော်နေမိတာပါ… စာဆက်ရေးဖို့လည်း တွန်းအားတွေဖြစ်လာပါတယ်… ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ကြီး အဓွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ရွာထဲမှာ စာကောင်းတွေထွက်လာရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ပါစေလို့..
သတ်ပုံတွေ စစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင် မွန်မွန်ကို စောင့်မျှော်နေတာ။
စာဆက်ရေးဖို့ တွန်းအားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
အားကောင်းမောင်းသန် ဆက်လက်ချီတက်ပါနော်။ :hee:
Congratulation ပါ ဦးကျောက်ရေ .
အန်တီမမ ရဲ့ အပင်ပန်းခံ စေတနာတွေကိုလည်း လေးစား ပါတယ်နော်..
စီဂျေကြီး အပြေးအလွှားလာသွားတာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စီဂျေကြီးနဲ့ အပြိုင် ဦးကျောက်လည်း နောက်မှာ (မန်းဂဇက် စာပေဆုရ) ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခု တိုးသွားပြီ။ :hee:
Ma Ma ရေ
ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလောက် အရည်အချင်း မရှိပါဘူး Ma Ma ရယ်.. Green Rose က စာစုံမဖတ်ဘူး။ စိတ်ဝင်စားရာလေး ကွက်ပြီးဖတ်တာမျိုးဆိုတော့..
(comment အဟောင်းတွေကို ပြန်မလှန်ချင်တာနဲ့ ဒီမှာပဲ ထပ်ရေးလိုက်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ)
Green Rose ရေ-
စာပေဆု ပေးဖို့ စတင်ကတည်းက လွယ်ကူပေါ့ပါးဖို့ တာရှည်ခံဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ လုပ်တာမို့…
ဖတ်မိသလောက်ထဲက ကြိုက်တာကို ရွေးပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ရွေးချယ်ခံ စာမူဟာ အကြိုက်တူသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ဝင်များဟာလည်း ပညာရှင်အဆင့် မဟုတ်ပဲ ……
ကိုယ်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို စုစည်းညီညွတ်စေလိုတဲ့ စေတနာနဲ့ လုပ်ဆောင်ကြတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ :hee:
ဟိုဥစ္စာလေ… ကျနော့်ပို့စ်မှာ မှတ်ချက်ပေးသူ ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ဝင်ဂျီးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ဂျောင်း ပြောဖို့မေ့ကျန်သွားလို့ အဟီး.. စိတ်အချိုးနဲ့
ဘယ်သူရွေးပြီး ပေးတဲ့ မှတ်ချက်ဆိုတာ ပြောပြခွင့်ရှိမရှိ မသိလို့ ပြောမပြနိုင်ပေမယ့်….
သူများထက် ခေါင်းတလုံးပိုမြင့်လို့ မမြင်လိုက်တာမို့….
ကိုယ်တိုင်ပေးတဲ့ မှတ်ချက်မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်။
ဘာပဲပြောပြော ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတာမို့ မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ ညီပါပေတယ် အမောင်ကြောင် :hee:
အလင်းဆက်က ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်ပေးသွားတာလားးးးးးးးးးး :harr:
ဘယ်သူတွေပဲရရ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ လက်ခုပ်တီးအားပေးနေပါတယ်နော်။ မရောက်တာလည်းကြာ နက်ပေါ်မရောက်ဖြစ်တာကြာလို့ သတိရလို့ ၀င်ရောက်လည်ပတ်သွားပါတယ်။
ပျောက်နေတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ မနောရေ-
နောက်ဆိုရင်တော့ ရွာထဲကို မကြာမကြာလာရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါစေလို့…… :hee:
ကိုယ်တိုင် ၀န်ခံချက်လေး.ပေးခွင့် ရှိမရှိ..မသိသေးလို့ ..
သူ့ ပိုစ့်ကို..ဒလိုကြီး ဝေဖန်မှတ်ချက် ပေးထားရသလား..ရှိုပြီး..
လိုက် ထု နေမှာကြောက်တာလည်း.ပါတာပေါ့ ။
တားကိုလည်း.ချိတ်အချိုးနဲ့ နော့် ။